InstallVPS: ko kana kuisa zvese zvaunoda pane server zvaive nyore sekukanya kamwe chete? | Linux Vakapindwa muropa
Ini ndinofunga zita remusoro rinototaura zvese. Kazhinji, kusimudza server yakatsaurirwa kana VPS zvinoreva kuisa base base system, uye kana zvangoitwa, tinofanirwa kuisa nekugadzirisa akateedzana mafomu ku siya sevha yakagadzirira. Semuenzaniso, kana isu tichida kukwirisa yedu LAMP server, isu tinofanirwa kuve neyedu Linux distro yakaiswa, uye zvakare nekuisa Apache, MySQL uye PHP. Raive basa rekuti kusvika parizvino taisakwanisa kubvisa kana tichida kuva neserura.
Asi ikozvino, chirongwa chinonakidza chinonzi IsaVPS anotibvumira gadza nekudzvanya kamwe chete uye zvese kubva padandemutande rayo rewebhu, nenzira yakapusa uye izvo hazvizotitore isu anopfuura masekondi mashoma kuti tiise zita redu rekushandisa, password, IP kana zita remubati weserura kwatinoda kuisa, uye sarudza pakati pesarudzo dzakasiyana siyana dzinotsigirwa uye mafomu atinoda. Zviri nyore kudaro, tobva tadzvanya pane bhatani kuti titange kumisikidza uye tinogona kuregeredza michina iyi chirongwa ichi chichiitira isu rese basa
Nzvimbo yacho InstallVPS inoenderana nechero mupi wekutambira munyika, inokurumidza, yakapusa, haidi kunyoreswa, pamwe nekuchengetedzeka nekuchengetedza password yedu uye kuibvisa kana kuiswa kwacho kwaitwa. Iyo inoshanduka chikuva, ine rutsigiro rweUbuntu 16 uye 18, kuwedzera kune Debian 8 kana 9 uye mamwe ma distros akadai seRed Hat neCentOS ichauya munguva pfupi.
Uye kana uri kushamisika nezvazvo iwo mafomu aunogona kuisa neizvozvo nyore kudzvanya uye siya wakagadzirira uye wakagadzirirwa, rondedzero iri seinotevera:
Webhu server LAMP
Webhu server LEMP
Chakavanzika gore ownCloud
Uye zvakawanda ...
Ivo havana kumbobvira vaita kuti zvive nyore kwazvo kwauri, saka kana iwe uine wekutambira mupi uyo asina sevhisi yekuisa iyi mhando ye maapplication otomatiki kana kuti haina iyo yauri kutsvaga pakati pavo, muInVVV iwe uchawana rubatsiro rwako rwakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » InstallVPS: ko kana kuisa zvese zvaunoda pane server zvaive nyore sekukanya kamwe chete?
Kutenda nechinyorwa, asi zvinhu zvinoverengeka zvinondinetsa:
Sei ini ndaizopa yangu server zvitupa kunevasingazive?
Nei usina chinhu nezvedu? Ndiri kureva, ndivanaani?
Nei isiri OpenSource uye zvinyorwa zvacho zvisina kugoverwa?
Chii chinondivimbisa kuti havazoise malware kana cryptominer kana yekunze kwekunze?
Iwe unofanirwa kuve uri kunze kwepfungwa dzako kuti upe iyo midzi yekuzivisa kune wechitatu bato.